Saddex maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Puntland - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandSaddex maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab oo lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Puntland
May 27, 2019 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Maleeshiyo Al-Shabaab ah oo lugeynaya Buuraha Golis. [Sawir Hore]
Garoowe-(Puntland Mirror) Saddex maleeshiyo oo katirsan Al-Shabaab ayaa lagu dilay duqeyn uu Mareykanku ka geystay gudaha Puntland, sida Taliska Mareykanka ee Afrika (AFRICOM) ay ku sheegeen war-saxaafadeed galabta oo Isniin ah.
Duqeynta ayaa Axadii ka dhacday Buuraha Golis, AFRICOM ayaa intaas ku dartay.
Sida ay AFRICOM sheegeen, ma jirto wax dad shacab ah oo dhibbaato ka soo gaartay duqeyntaas.
Duqeyntan ayaa ah tii labaad oo ka dhan ah maleeshiyada Al-Shabaab tan iyo Jimcadii markaas oo Mareykanku uu duqeyn ku dilay labo maleeshiyo isla deegaankaas.
Tan iyo bishii April Mareykanka ayaa ku dhawaad lix duqeymood ka fuliyay Buuraha Golis ee Puntland, halkaas oo loo maleynayo in ay ku dhuumanayaan maleeshiyooyinka Al-Shabaab iyo ISIS, oo ay dagaalo dhexmareen bilihii dhawaa ee la soo dhaafay.
Boosaaso-(Puntland Mirror) Madaxweynaha Puntland Cabdiweli Maxamed Cali ayaa maanta oo Jimce ah dib ugu soo laabtay magaalo xeebeedka Boosaaso kadib bil ku dhawaad oo uu ku maqnaa Sucuudi Caraabiya isaga oo gudanayay waajibaadka xajka. Madaxweyne [...]
Ku dhawaad 80 qof oo ku dhimatay qarax ka dhacay magaalada Baqdaad ee Ciraaq
Baqdaad-(Puntland Mirror) Ku dhawaad 80 qof oo badankood ay ahaayeen Shiico ayaa lagu dilay qarax weyn oo ka dhacay kaalin shidaal oo kutaala koonfurta caasimada dalka Ciraaq ee Baqdaad, sida ay sheegeen saraakiil dhanka ammaanka [...]
Muqdisho-(Puntland Mirror) Madaxii maleeshiyada Al-Shabaab ee gobolka Shabeellaha Hoose ayaa isku dhiibay ciidamada dowladda federaalka Soomaaliya, sida ay ku warantay idaacada dowladda ee Radio Muqdisho maanta oo Sabti ah. Sargaalka is-dhiibay ayaa magaciisa lagu sheegay [...]